ITanzania Izobamba Umbukiso Omkhulu Wezokuvakasha Wesifunda SaseMpumalanga Afrika ngo-Okthoba
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » ITanzania Izobamba Umbukiso Omkhulu Wezokuvakasha Wesifunda SaseMpumalanga Afrika ngo-Okthoba
Ongqongqoshe bonke bavumile ukusungula umbukiso waminyaka yonke we-EAC Regional Tourism Expo (EARTE) ngenhloso yokwenza ngcono ukubonakala kwesifunda nokusimaketha njengendawo eyodwa yezivakashi.
Izifundazwe zaseMpumalanga Afrika zizobamba umbukiso omkhulu wezokuvakasha ngo-Okthoba nonyaka.
Umbukiso wokuqala futhi omkhulu wezokuvakasha kulindeleke ukuthi wenzeke eTanzania.
Umbukiso omkhulu wezokuvakasha wesifunda uzobanjelwa ukuheha ababambiqhaza abavela emazweni angamalungu eTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi kanye neSouth Sudan.
Ezokuvakasha zokumaketha njengomkhiqizo wezomnotho esifundeni, izifundazwe zaseMpumalanga Afrika zizobamba umbukiso omkhulu wezokuvakasha ngo-Okthoba nonyaka ngaphansi komoya wokuhlanganiswa kwesifunda kanye nomkhankaso wokumaketha ezokuvakasha esifundeni.
Umbukiso wokuqala nomkhulu wezokuvakasha wesifunda kulindeleke ukuthi wenzeke eTanzania, uhehe amazwe ayisithupha angamalungu e-East African Community (EAC) ukuthi abukise ngezindawo zawo eziheha izivakashi ngaphansi kwesambulela sokuhlanganiswa kwesifunda kwezokuvakasha.
Imibiko evela ku- Umphakathi waseMpumalanga Afrika Amahhovisi amakhulu enhloko yezokuvakasha yedolobha elisenyakatho neTanzania i-Arusha athi umbukiso wokuqala nowezokuvakasha omkhulu uhlelelwe u-Okthoba ukuheha ababambiqhaza abavela emazweni angamalungu eTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi neSouth Sudan.
UNgqongqoshe Wezemvelo Nezokuvakasha eTanzania uDkt.Damas Ndumbaro ubememezele ngomkhankaso wezokuvakasha esifundeni ngesikhathi kunomhlangano obonakalayo noMkhandlu Wongqongqoshe Wezokuvakasha e-East African Community (EAC).
Africa Arusha Burundi Community Covid-19 E-East Africa Umphakathi waseMpumalanga Afrika Marketing Tanzania Ezokuvakasha
Abavakashi Abagonywe Ngokugcwele Base-US nase-EU Bazoba Yisibusiso Emnothweni Wase-UK
AmaSanitizer Ezandla Manje Ayakhunjulwa